I-Tranquil Escape~I-Modern 1BD Suite kuGreenway - I-Airbnb
I-Tranquil Escape~I-Modern 1BD Suite kuGreenway
Siyakujabulela ukwamukela abantu futhi sihlala endaweni ethule e-Greenway. Sihlala endaweni eyi-cul-de-sac endaweni enokuthula nephephile etholakala kalula eduze nezitolo ezinkulu kanye ne-IKEA, i-UNC University, i-IBM, i-Wells Fargo, i-PNC Music Theatre, kanye nojantshi wesitimela.
Ifulethi elingaphansi elisanda kulungiswa lesimanje nelibanzi elingaphansi kwegumbi lokulala elingu-1 elinekhishi eligcwele, umbhede wenkosi, ikhabethe, igumbi lokugezela eligcwele, futhi lihlolwe kuvulandi.
Le iyunithi YAMAHHALA YEZILWANYANA & OKUNGAGUMBI noma I-VAPING. AKUKHO OKUNGEZESIFUNDAZWE!!!!
Indawo Yokupaka Ku-Driveway
I-Cable TV endaweni yokuhlala negumbi lokulala
Ikhishi Eligcwele Ngokugcwele eline-Keurig
I-King Size Bed & Pull Out Couch (Pack & Play iyatholakala)
Lawula ukushisisa kanye ne-Central Air Condition (Hlukana neKhaya lonke ukuze ulawule izinga lokushisa ukuze ukhululeke)
Indawo Indawo!!!! Yonke i-Charlotte itholakala kalula.
INorthlake Mall / IKEA/ Super Target
IPNC Music Pavilion
mina 85 & I77
I-Concord Mills Mall
Kuyintandokazi yakho!!! Siyajabula ukusebenzelana ngendlela esifisa ngayo. Siyakujabulela ukuhlangana nabantu abasha, kodwa futhi sizohlonipha ubumfihlo bakho. Isivakashi sethu sijabulela ubumfihlo ngenkathi sihlala efulethini lethu, siqinisekisa ukuthi ungakhululeka futhi ujabulele ukuhlala kwakho. Siphendula kakhulu ngombhalo uma udinga okuthile. Sihlala endlini engenhla nezingane zethu. Sivame ukubingelela isivakashi lapho sifika futhi sihambe naso lapho singena khona.
Kuyintandokazi yakho!!! Siyajabula ukusebenzelana ngendlela esifisa ngayo. Siyakujabulela ukuhlangana nabantu abasha, kodwa futhi sizohlonipha ubumfihlo bakho. Isivakashi sethu sij…